Useslọ na ime obodo nwere ọdọ mmiri, maka ịgbazite na ire ere n'àgwàetiti Ibiza.
Villas na Ibiza | Useslọ na obodo nta nwere ọdọ mmiri maka mgbazinye na ire ere na agwaetiti Ibiza.
Ihe mgbazinye Villa
Buru ndụ Ibiza zuru oke
Chọta mpempe gị nke paradaịs n'etiti nhọrọ anyị nke ime obodo na Ibiza
akara ngosi / okpukpu abụọ-chevron-alaEji edemede.
Chọgharịa nchịkọta mara mma nke ụlọ maka mgbazinye
Ezumike ụlọ na Ibiza
Anyị raara onwe anyị nye ịchọta ezigbo ezumike ezumike gị na Ibiza.
Họrọ n'etiti nhọrọ anyị nke ụlọ okomoko nwere ọdọ mmiri ma ọ bụ fincas nwere mkpụrụ obi, nke ọ bụla n'ime obodo ndị ahụ na pọtụfoliyo anyị ka ejiri nlezianya họrọ ma nye ụdị nkasi obi niile.
Mara mma nke oge a na nkecha villa na Ibiza
Nke a bụ ụlọ obibi ime ụlọ ise nke 550m2 dị na etiti ugwu nke Ibiza. Ọnọdụ ikuku zuru ụwa ọnụ na-egosipụta ọkaibe dị jụụ site n'echiche nke ịma mma mara mma na-adịghị agafe agafe ma na-enye ihe ...
Gaa na ihe onwunwe
Tinye ka ọkacha mmasị Wepụ site na ọkacha mmasị
Finca mara mma maka ịgbazite na Ibiza nwere echiche osimiri
Finca a mara mma maka ịgbazite na Ibiza dị na mgbago ugwu nke agwaetiti ahụ naanị obere oge site na obodo a ma ama nke San Juan. Finca dị afọ 300 ma weghachite ya na Moori ...
Obodo mara mma nke di na Ibiza, udo nke udo
Obodo mara mma nke dị na Ibiza, ebe udo, nwee ọfụma ma wulite ya nso nso, o wuru 300m², nke nwere ntụ oyi zuru ezu. Ọ dị kilomita 4 site na Santa Gertrudis na 10 km site na ...
Villalọ ọmarịcha ọgbara ọhụrụ dị na Ibiza nke dị nso na ndịda agwaetiti ahụ
Villalọ ọmarịcha ọgbara ọhụrụ a na -eji ọkụ sitere na windo buru ibu na -enye mmetụta nke oghere ma na -emesi ịdị mma ya ike. Ụlọ ahụ dị n'ime ime obodo dị jụụ n'ime obi ...
Ma ọ bụ chọgharịa nchịkọta zuru ezu
Ibiza, agwaetiti ọcha
Mara mma osimiri na turquoise mmiri na nkpoda ugwu, ọmarịcha obodo nta, a na-atọ ụtọ gastronomy na ụfọdụ ndị kasị ama klọb na ụwa. Ibiza bụ ihe a niile na ọtụtụ ndị ọzọ. Ihe nketa ọdịnala ya sitere na mgbanwe nke ọdịbendị dị iche iche nke mejupụtara akụkọ ntolite ya, Punic, Roman, Phoenician… emeela obere agwaetiti Mediterenian ka ọ bụrụ ntụnye ụwa.
Yabụ kedu ihe kpatara ịnụ ụtọ Ibiza naanị n'oge ọkọchị? Ma ọ bụ n’oge ekeresimesi, Ista Ista ma ọ bụ n’oge ọ bụla ọzọ n’afọ, ezinụlọ pụrụ ịnụ ụtọ ọtụtụ ihe a na-eme n’akụkụ mmiri site na ihu igwe dị nro na ọtụtụ ụbọchị anwụ na-acha.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ndụmọdụ ebe ị ga-ebi, jupụta ụdị ma ọ bụ kpọọ.
Anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịchọta ụlọ obibi zuru oke ma chọpụta ezigbo Ibiza.
Idenye aha na anyị Newsletter
Idenye aha ugbu a
Ala na ụlọ na Ibiza
N'agbanyeghị na ama ama maka ndụ abalị ya na ebe ọ na-ewu ewu, Ibiza karịrị nnọọ osimiri na klọb. Agwaetiti ahụ na-enye ebe anwansi na nke magburu onwe ya, ebe a na-emetọghị emetọ na ezigbo ndụ dị naanị awa ole na ole si na ebe ọ bụla na Europe.
Ibiza bu ebe zuru oke inwe ulo.
Lelee ndepụta anyị nke ụlọ maka ọrịre, ụlọ, na ọrụ mmepe ala na Ibiza
Ala maka ire ere na Ibiza nwere oru ngo
Pricejụ ego 550.000 €
Apartmentlọ ezumike maka Ibiza Botafoch
Pricejụ ego 1.200.000 €
Houselọ maka ire ere na Ibiza - Marina Botafoch
Pricejụ ego 1.590.000 €
Villa maka ire ere na Ibiza, n'ebe ugwu nke agwaetiti ahụ
Pricejụ ego 1.399.000 €
Mgbochi n'àgwàetiti Ibiza n'ihi ọrịa na-efe efe-19.
Mmelite 17 Nov 2021 Ugbu a, usoro iwu na Spain ewepụtaghị ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa yana machibido ndị na-enweghị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, dịka ewepụtalarị.
Ọnọdụ nke Covid 19 - Coronavirus na Ibiza, Balearic Islands, Spain
16 Nov 2021 Ugbu a na Ibiza na Formentera enwere mmadụ 266
Imeghe ụlọ oriri na nkwari abalị na Ibiza.
Ebuliri mmachi na Ibiza na Formentera n'ihi coronavirus covid-19 dị ka
Smart Working n'ime Ibiza
Kemgbe mmalite nke coronavirus covid-19 ọrịa, ọtụtụ ndị mmadụ na-eme
Yacht ezumike na Ibiza
Akwụkwọ nchịkwa superyacht dị na mpaghara Balearic bụ ohere kacha mma iji nweta ụfọdụ
Nọvemba 16, 2021 ugbu a na Ibiza na Formentera enwere mmadụ 266 bu ọrịa coronavirus covid-19. Nke a bụ ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ọrịa nje
A na-ebuli mmachi na Ibiza na Formentera n'ihi coronavirus covid-19 ka ọnọdụ ọrịa na-efe efe na agwaetiti Balearic na-aka mma. Klọb Ibiza ga -enwe ike imepe
Kemgbe mmalite nke coronavirus covid-19 ọrịa na-efe efe, ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ihe na-arụ ọrụ n'ụlọ na mgbe Social ịkpapụ ka dị ike na ọtụtụ mba nwere
Nnukwu akwụkwọ nchịkwa na Balearic akipelago bụ ohere kachasị mma iji hụ ụfọdụ n'ime ọmarịcha ịma mma na oke osimiri Mediterenian. Na chartering a crewed moto ụgbọ mmiri
Ogologo oge mgbazinye na Ibiza
Ọ bụ ezie na ọtụtụ narị ndị Europe gosipụtara n'okporo ámá megide gọọmentị ha maka mkpọchi mkpọchiri, nke mechibidoro ha ọzọ n'ụlọ ha wee nwee ike ịga.
Nanị Okomoko Villa Na Ibiza Iche Oké Osimiri
Fantastic Minimalist Style Villa Na Ibiza
Contemporary Villa Na Ibiza
Ọ dịghị ihe na-ama ezigbo ihe ọmụma obodo anyị nke Ibiza.
Kpọọ anyị maka enyemaka, ọnụego kacha mma na ọrụ nchekwa.
Villas na Ibiza | Useslọ na ime obodo nwere ọdọ mmiri, maka ịgbazite na ire ere n'àgwàetiti Ibiza.
Nhọrọ nke ụlọ maka mgbazinye
Nchịkọta zuru ezu >>
Villa mara mma na Ibiza nwere echiche oke osimiri site n'akụkụ niile nke ụlọ ahụ
Site na 1.200 € / ụbọchị
Ọmarịcha ụlọ a gbara ogige nke ọma na nlele oke osimiri dị egwu
A ọmarịcha zoro Ibiza mgbazinye onwunwe na ebube echiche
Site na 2.000 € / ụbọchị
Blog, Magazin, ndụmọdụ maka Ibiza
Achọpụtara nsogbu n'ụdị a. Ntinye ya nwere ike bute mperi. Biko kpọtụrụ onye nchịkwa saịtị.
Achọrọ m ịme ndoputa Achọrọ m ịzụta ala Achọrọ m ozi
Obodo Ụlọ Lands
Rentals Site Mpaghara
Ọ bụ Canar
Ọ dị ebe ahụ
Ala na oru ngo
Ememe atgbọ mmiri
Utilọ nkwari akụ